60 visiteurs - 77 pages vues
182792 visiteurs - 635618 pages vues
Maro ny zavatra iainana,
Eo amin'ny andavanandro ;
No tena ilaina fandeferana,
Sy fotoana koa isainana,
Mba ahafahana mitandro,
Ny tsy hisin'ny hatezerana.
Misy ireo izay manenjika,
Tsy any aloa fa any afara.
Mihevitra ny hamingana,
Mifofotra ny handrendrika,
Mikendry foana ny hahatara,
Sy ny hanapitra tamingana.
Maro tsy toko tsy forohana,
Ireo izay miezaka mifosa.
Tsy tokony ahataitra izany.
Na misy aza ny manohana,
Ny andavanandro aleo hisosa,
Tsy misy rototra amin'izany.
Misy koa ireo mpanatsatso,
Mahita foana ny hambakaina,
Hanaratsiana ny zava-tsara.
Mahavita ny miantsoantso,
Ireo mbola miroaroa saina,
Hanova ny fotsy ho maramara.
Maro koa ireo mpialona,
Mahita foana ny holazaina.
Mijery hatrany anaty vilany,
Ron'anana ve sa amalona ?
Amin'izay misy hotantaraina,
Miaro fanaratsiana sesilany.
Izany ny sain'ny mpanaratsy,
Mifampisintona foana midina,
Tsy mifanohana mba hitraka.
Fa toy ny kongona sy parasy,
Tsy misy afaka ny manidina,
Fa lany andro mifampikapa.
Na maro aza ny mpanenjika,
Na betsaka koa ny mpialona,
Na misy aza ny mpanatsatso ;
Ny marina hamadika ho herijika,
Hery handrisika ny hamalona,
Ka ho lasa mamy ny matsatso.
01 Aprily 2019
Sokajy : fiainana, Fiaraha-monina, Tontolo iainana